काण्डैकाण्डको ओली सरकार, यी हुन् १७ चर्चित काण्डहरु - Samajbad
काण्डैकाण्डको ओली सरकार, यी हुन् १७ चर्चित काण्डहरु
in राजनीति, विचार / वहस, विशेष
काठमाडौं : माघ २९, महाकाली सन्धिको बेला भारत परस्तको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला नाकाबन्दीको विरोध गरेर भारत परस्तको आरोप पखालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली आफु दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनामै भारतको चर्को चाकडी गर्न थाले । नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारा लगाएर चुनावमा आकर्षक परिणाम निकाल्न ओली सफल भए । तर, प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनले नेपालमा अलोकप्रिय ठानिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दुईदुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गराएपछि आलोचनाका पात्र बने । त्यती मात्रै होईन प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेपाली जनताले समृद्धिको आशा पनि गरे तर अन्त: ओलीको समृद्धिको नारा काण्डै काण्डमा बदलियो । निर्मला हत्याकाण्डदेखि बालुवाटारको जग्गा कब्जा हुँदै एमसीसीसम्म पुगेर बदनाम बन्न पुगेको छ ।
हिजो चुनावको बेला स्वच्छ छवी भनेर प्रचार गरिएका ओली फेरी आज आएर कान चिर्ने जोगीका रुपमा चिनिएका छन् । दुई बर्षमा सरकारले जनताका पक्षमा केही आश लाग्दो काम गर्न सकेका छैनन् । बरु मंहगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी, दलाली र कुशासनले जनता आजित भएका छन् । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विभिन्न २ दर्जन बढी काण्डहरु घटे जसले कम्युनिस्ट भन्न समेत लाज मान्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । दिनानु दिन मुलुकको भबिष्य अध्यारो ती धकेलिएको छ । देशको अर्थतन्त्र एकपछि अर्को गरी ओरालो लाग्दै गएको छ ।
महाकाली सन्धि लागु भएको दास्रो दिनबाट दैनिक नेपालले २० करोड रुपैँया पाउँछ । पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भन्ने टुक्का भट्टयाएका ओलीले भारतले नाकाबन्दी गरेपछि केही विरोध गरेजस्तो गरेका थिए । केही समयलाई भएपनि नक्कली राष्ट्रवादको मदतबाट दुई तिहाई नजिकको मत पाए । तर उनले भ्रष्टलाई कारबाही होईन संरक्षण गरे । ठेकेदारहरुको भोजमा सहभागी भए । यती गु्रपलाई ८ दशकसम्मको अवधि तोकेर जग्गा फ्रिमा दिए । बालुवाटार कब्जा गर्ने आफ्ना महासचिवलाई मुद्दा चलाउनुको साटो संरक्षण गरे । समग्रमा ओली नेतृत्वका सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्नु त परै जाओस् झन् बर्बादी तिर धकेलि रहेको छ । दुई बर्षमा दुई दर्जनबढी काण्डहरु ओली सरकार असफल भएका उदाहरणहरु हुन् ।
हेर्नुस् चर्चित १७ काण्डहरु ।
लेखक : राजन ठगुन्ना
१ : राजस्तानी ड्रेसकाण्ड
जनकपुरबाट राजकिय भ्रमण शुरु गरेका मोदीलाई स्वागत गर्न प्रम ओली जनकपुर नै पुगे ।जानकी मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने मोदीको कार्यक्रममा साथ दिएका ओली २ नम्बर प्रदेशमार्फत गरिएको नागरिक अभिनन्दनमा पनि सहभागि भए । लगत्तै काठमाडौं आएका मोदीलाई काठमाडौं महानगरको तर्फबाट अर्को नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो । यो अभिनन्दन काण्डपछि प्रम ओली र उनका समर्थकको उग्र राष्ट्रवादी हल्लाखल्ला धरासायी हुनपुग्यो ।
२ : ३८ क्वीण्टल सुनकाण्ड
ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको मतसहित सरकार बनेपछि सरकारलाई असफल साबित गर्ने अर्को काण्ड हो ३८ क्वीण्टल र ३३ किलो सुनकाण्ड । माथिल्लो तहका राजनीतिक दलका नेताहरु नै मिलेर ३८ क्वीण्टल र ३३ किलो सुनकाण्ड घटेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गर्ने भन्दा पनि दोषीलाई बचाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
३ : निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड
१० साउनमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । यो घटनाले देशै उद्देलित बनायो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखी महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायतले घटनाको विरोधमा सडक प्रदर्शन नै गरे । संचारमाध्यामले प्रमुखताका साथ यो विषय उठाइरह्यो । पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्ड भएको डेढ बर्ष पुरा भयो, तर अहिलेसम्म सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन ।
निर्मला प्रकरणमा प्रहरी शुरुदेखि नै विवादास्पद भूमिकामा देखियो । घटनास्थलमा प्रहरीले शव धोइपखाली गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी नै सक्रिय भएको तथ्य बाहिर आयो । तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज बिष्ट बर्खास्त भए । सरकारले छानविनको लागि समिति पनि गठन ग¥यो, प्रतिवेदन आयो । तैपनि हत्यारा पत्ता लागेन । निर्मलाका बुबाआमा निरन्तर अनसन र धर्नामा बसे । निर्मलाका बुबा यज्ञराजले यही क्रममा मानसिक स्वास्थ्यमा संकट बेहोर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका विभिन्न गैरजिम्मेवार टिप्पणी सार्वजनिक भए । पञ्चायतकालको नमिता–सुनिता काण्ड झैं यो काण्ड पनि दिनानुदिन रहस्यको गर्भभित्र विलुप्त भैरहेको छ । विभिन्न शंका उपशंकाका बीच दण्डहिनता हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यही काण्डमा पुगेर चुरचुर भैरहेको छ ।
४ : सिण्डिकेट काण्ड
सरकार गठन भएको केही समयमै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्य गर्न गृहमन्त्रालयले पहल ग¥यो । सिण्डिकेट लगाएर आफ्नो रुटमा अरुलाई छिर्न नदिने यातायात व्यवसायीलाई कार्वाही गर्न पनि खोज्यो । विभिन्न रुटमा प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई यातायात चलाउन सहजिकरण पनि गरियो । सिन्डिकेटलाई संस्थागत रुपमै हटाउन विभिन्न यातायात व्यवसायी संस्था खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले आदेश पनि दिएको थियो । सिण्डिकेट लगाउने शक्तिशाली यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको बैंक खाता रोक्का गरियो । तर गृहमन्त्रालयको यो पहल धेरै दिन टिक्न सकेन । दशैं लगायतका चाडपर्वमा यात्रुलाई सुविधा दिने कुनै योजना सरकारसँग थिएन ।
५ : मार्सीभात काण्ड
डा. गोविन्द केसीको १५ औं अनसन चलिरहेको बेला नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एक शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुर ठिमीस्थित घरमा मार्सी चामलको भात खाइरहेको फोटो सार्वजनिक भयो । उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा तत्कालै भाइरल बन्यो भने मिडियामा एक मसलेदार समाचारको विषय बन्यो ।
प्रसाईंको उक्त टिप्पणीले मार्सीभात काण्डलाई झनै मुखर गरिदियो । प्रधानमन्त्री ओली तथा अध्यक्ष प्रचण्डको निजी इच्छा र आदेशमा व्यवसायी प्रसाईंले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन लागेको र प्रसाईंलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको चर्चा चल्यो । व्यापक आलोचनाका बाबजुद प्रसाईंको अनर्गल अभिव्यक्तिले छुट पायो भने प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिक धरातलमा व्यापक प्रश्न उठ्यो ।
६ : वाइडबडी काण्ड
ओली सरकारले महत्वका साथ प्रारम्भिक उपलब्धीको लिस्टमा राखेको वाइडबडी जहाज अन्ततः इतिहासकै एक ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डमा परिणत भयो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो काण्डमा मुछिएका आफ्ना मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई न त राजिनामा गराउन सके, नत पदबाट बर्खास्त नै गरे ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी लगायत दुई पूर्वमन्त्रीसहित नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई मूख्य दोषी करार गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई नै बेवास्ता गर्दै सरकारले छुट्टै छानबीन समिति गठन गरेको थियो । पछि पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पाथीभरामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि वाईडबडी काण्ड सेलाएर गएको थियो ।
७ : होली वाईन काण्ड
विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनद्वारा काठमाण्डौंमा आयोजित एसिया प्यासिफिक समिट २०७५ मा प्रधानमन्त्री स्वयम्को सहभागिताले सरकारलाई अर्को स्क्यान्डलमा फँसाइदियो । रोहिंग्या मुस्लिम समुदायको कत्लेआम गरेको आरोपमा फँसेकी म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी समेत सहभागि उक्त समिटको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तीन दिनसम्म सवारी आवागमनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गरेको थियो । चर्को सार्वजनिक विरोधपछि उक्त निर्णय भने सरकारले दुई दिनमा फिर्ता लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैं तीन दिनसम्म उक्त समिटका लागि सोल्टी होटलमा धर्ना कसेर बसेको तथ्य व्यापक आलोचनाको विषय बन्यो । तैपनि प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम छाडेनन् । बरु मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नै नगराई उनले उक्त संस्थाले दिएको १ लाख डलरको पुरस्कार स्विकार गरे । ‘नेतृत्व र असल शासन अवार्ड’ नामको उक्त पुरस्कारको पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले उक्त पुरस्कारको रकमलाई सरकारी कोष बनाएर जम्मा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराए । तर मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृति नलिई एउटा अन्तराष्ट्रिय रुपमै बदनाम संस्थाको पुरस्कार लिएकोबारे कुनै स्पष्टिकरण दिन उनले आवश्यक ठानेनन् ।
८ : पप्पु काण्ड
गौर जिल्लास्थित लालबकैया नदीको टिकुलियाघाटमा निर्माणाधिन पुलको पिल्लरमा ठोक्किएर गत भदौमा एउटा डुँगा दुर्घटना भयो । उक्त दुर्घटनामा ५ जनाले ज्यान गुमाए । त्यो थियो म्याद गुज्रिसक्दा पनि पिलर मात्रै बनेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनको पुल । त्यसपछि गौरमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध प्रदर्शन पनि भयो । साथै दर्जनौं ठेक्कामा पप्पुले गरेको बदमासीको पर्दाफास पनि त्यही घटनापछि भयो । संघिय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार संस्थापक रहेको उक्त कन्स्ट्रक्सनले २० वटा साना–ठूला सडक र दर्जनौं पुलको ठेक्का पनि आफ्नै पोल्टामा राखेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो ।
बर्दियाको भासिएको बबई पुल र प्राविधिक त्रुटीका कारण उद्घाटन नै नभएको टेकुस्थित विष्णुमतिको पुल पनि पप्पुले नै निर्माण गरेको थियो । यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पायो । सांसदहरुले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग गरे । ठेक्का लिएका दर्जनौं सडक र पुल समयमा नसकेको र गुणस्तरहिन निर्माण गरेकोमा बदनाम पप्पु कन्स्ट्रक्सन लगायत अरु बदनाम ठेकदार कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भाषण गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पटकपटक गरे । तर त्यो भाषण व्यवहारमा उत्रिएन । अन्ततः अरु ठूला परियोजनाको ठेक्का समेत सरकारले उही पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै दियो ।
९ : मेलाम्ची ठेकेदार काण्ड
मेलाम्चीको पानी उपत्यका आइपुग्ने अनेकौं मितिहरु हल्लामै आए हल्लामै गए । बिना मगर खानेपानी मन्त्री बनेपछि दशैं अगाडि नै मेलाम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यामा आइपुग्ने दाबी गरिन् तर सुरुङमा काम गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी एकाएक आयोजना छाडेर भागेपछि मेलाम्चीको काकाकुल सपना फेरि स्थगित भयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ५ प्रतिशत मात्रै काम बाँकि रहेको बताइन्छ । उपत्यकाका सबैजसो सडक र गल्ली खनेर मेलाम्चीले पाइप बिछ्याउने क्रम जारी छ । यही कारणले पनि उपत्यका धुलो र हिलोको चपेटामा छ । तर ठेकेदार नै भागेपछि खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का प्रकृयामा गएर गरियो । नयाँ ठेक्का प्रकृयामा जाँदा मेलाम्ची परियोजना पछाडि धकेलिएको छ ।
१० : सुख्खा बन्दरगाह काण्ड
चोभारका जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद गत महिना सुख्खा बन्दरगाह शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले स्थानीय जनतालाई आक्रोशित तुल्याएको छ । यो अर्को यस्तो घटना हो जहाँ अघोषित कफ्र्यु लगाएर कुनै कथित् विकास कार्यक्रम शिलान्यास गरिएको थियो । व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर, स्थानीयलाई घरबाट ननिस्कन उर्दी जारी गर्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानियलाई धरपकड गरेर उक्त शिलान्यास सम्पन्न गरिएको थियो ।
विश्व बैंकको १ दशमलव ५ मिलियन डलर ऋणमा बनाउन लागिएको सुख्खा बन्दरगाहमा ठूला लरी र ट्रकहरु ल्याउने भने प्रचारित बाटोको भने अत्तोपत्तो छैन । हाल पहुँचमार्ग भनिएको बल्खुबाट प्रवेश गर्ने सडकले रिङरोडलाई नै पहुँच मार्ग मान्छ । त्यसैले पनि सुख्खा बन्दरगाहको सम्पूर्ण योजना समस्याग्रस्त देखिन्छ । त्यसमाथि स्थानियले उक्त परियोजनाको व्यापक विरोध मात्र गरेका छैनन्, निर्माणस्थलमा हिमाल सिमेन्ट हुँदादेखिका सरोकार सम्बोधन गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेका भए पनि सरकारले कुनै सुनवाई नै गरेन ।
११ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचार गर्न सरकारले ठूलो लगानी गरेपनि अन्तमा सो कार्यक्रम गाईभैसी धपाउने, बाटो सम्याउने, दिनभरी घाम ताप्ने, कार्यकर्तालाई पोस्ने र बाटोको झार उखेल्ने कार्यक्रमका रुपमा चर्चित रहेको छ । डा. बाबुराम भटराईको पालामा शुरु भएको र अरु सरकारले समेत तयारीमा खर्च गरेको उक्त कार्यक्रमलाई मौलिक कार्यक्रमजस्तो गरी प्रचार गरेको भनेर पनि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
१२ : कुमार पौडेल हत्याकाण्ड
मिति २०७६ ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सबैभन्दा विवादित मानिने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याकाण्ड रह्यो । प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ ओटा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको मानव अधिकार आयोगले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो । सो प्रकरणमा मुछिएका ५ सुरक्षाकर्मीमाथि कारवाही थाल्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिईसको छ। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले राजीनामा दिएकै दिन माघ १७ गते सिफारिस कार्यान्वयनको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेको छ। पौडेललाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानिएको निष्कर्षसहित आयोगद्वारा घटनामा संलग्न ५ सुरक्षा अधिकारीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई ३ महिनाअघि सिफारिस गरेको थियो। ३ महिनाभित्र कारवाही गरी जानकारी पठाउन आयोगले गत कात्तिक ५ गते सिफारिस गरेको थियो। कारवाहीको जानकारी पठाउने म्याद भने माघ ५ मै सकिएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफामा सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए कारण खुलाएर २ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। सिफारिसअनुरुप कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बेहोरासहित गृहले १२ दिन ढिलो गरी गत शुक्रबार आयोगलाई जानकारी दिएको छ ।
१३ : एनसेलको ७५ अर्ब राजश्व छुट
ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि एनसेललाई ७५ अर्ब कर छुट दिएपछि लोकप्रियता नाटकीय रुपमा घटेको छ । विभिन्न जालझेल गर्दै सरकारले नै एनसेललाई करिब ५२ अर्ब छुट गराएपछि सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ निक्कै घटेको छ । विभिन्न साँठगाठ गरी राज्यलाई ठूलो क्षती हुने गरी एनसेललाई संरक्षण गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो र भईरहेको छ ।
१४ : कालापानी लिपुलेकमा आत्मसर्मपण
लामो सयदेखि भारतले अबैध रुपमा कब्जा गरेको नेपाली भूमि लिपुलेका, लिम्पियाधुरा र कालाानीलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता ल्याउन कुनै पनि प्रयत्न नगरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री तहबाट त्यसको समाधानको अपेक्षा थियो तर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो । अझ अनौठो कुरा त के थियो भने, मन्त्रालयले जारी गरेको मिति,जारी गर्ने व्याक्तिको नाम समेत उल्लेख गरिएको थिएन । नत प्रधानमन्त्री ओलीले नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन संवाद गरे नत्र सरकारले नै नेपालको तर्फबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा राखेर नक्सा नै जारी गर्यो ।
१५ : एमसीसी विवाद
ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चर्को आलोचना भएको अर्को काण्ड हो एमसीसी कम्पेक्ट । अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग भएको अमेरिकाले प्रष्ट पारेपछि नेपालमा चर्को विरोध भयो । सम्झौतासम्बन्धी विवाद चरमचुलीमा छ । नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सडक स्तरोन्नति तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । तर, कतिपयले यसलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएकाले सैन्य गठबन्धनमा जान नहुने भन्दै यासको चौतर्फि विरोध भईरहेको छ । तर ओली समुहका नेताहरु र नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन् । एमसीसीको अहिले नि नेपालमा विवाद भईरहेको छ ।
१६ : यती काण्ड
ओली नेतृत्वको सरकारले नियम नै शंसोधन गरेर यती गु्रपलाई ५ अर्ब घाटामा जाने गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिएपछि सरकार विवादमा मुछिएको छ । सरकारले यती गु्रपलाई कतै सयौ रोपनी जग्गा ८० बर्षका लागि फ्रिमा हस्तान्तरण गरेको छ भने वन्य जन्तु आरक्षको जग्गालाई पनि विभिन्न साँठगाठ गरी लिजमा दिएको भेटिएपछि ओली सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
१७ : बालुवाटार काण्ड
ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको मतसहित सरकार बनेपछि सरकारलाई असफल साबित गर्ने अर्को काण्ड हो प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्ड । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले नै सरकारी जग्गाा कब्जा गरेको समाचार बाहिर आएपछि ओलीको सरकारलाई सत्य तथ्य छानबीनको चर्को दबाब पर्यो ।
तर लामो समयसम्म सरकारले केही पनि प्रक्रिया अगाडी नबढाएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सो जग्गा हिनामिनामा मुछिएका सरकारी उच्च अधिकारी शोभाकान्त ढकालको घरमा बम विष्फोट गरेपछि बाध्य भएर छानबीन अगाडी बढायो । तर ओली निकट रहेको महासचिव र एक जना सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायशीशलाई भने कारबाहीको दायरमा ल्याईएन । जबकी कांग्रेस नेता विजय गच्छदारदेखि भाटभटेनीका संचालक मिनबहादुर गुरुङ लगायत १६५ जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो । त्यसपछि सरकारको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
नेता नेपाल र डा. भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर